1 Samuel 7 | Intanɛt so Bible | Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
7 Enti Kiriat-Yearimfo+ no bae bɛfaa Yehowa adaka no de foro kɔɔ Abinadab fie,+ koko no so, na wodwiraa ne ba Eleasar ho sɛ ɔnhwɛ Yehowa adaka no so. 2 Ɛbae sɛ efi da a Adaka no baa Kiriat-Yearim no, ɛkyɛe wɔ hɔ; edii mfe aduonu wɔ hɔ, na Israel fie nyinaa dii awerɛhow hwehwɛɛ Yehowa akyi kwan.+ 3 Ɛnna Samuel ka kyerɛɛ Israel fie nyinaa sɛ: “Sɛ mo koma nyinaa na mode resan aba Yehowa nkyɛn+ a, ɛnde munyi ananafo anyame a ɛwɔ mo nkyɛn+ ne Astoret ahoni+ no mfi mo mu, na momfa mo koma mũ nyinaa nni Yehowa akyi na monsom ɔno nkutoo,+ na obegye mo afi Filistifo no nsam.”+ 4 Na Israelfo no yiyii Baal anyame+ no ne Astoret+ ahoni no fii wɔn mu, na wɔsom Yehowa nkutoo. 5 Ɛnna Samuel kae sɛ: “Mommoaboa Israel+ nyinaa ano mmehyia Mispa,+ na memmɔ Yehowa mpae+ mma mo.” 6 Enti wɔboaboaa wɔn ho ano behyiaa Mispa, na wɔsaw nsu hwie guu fam Yehowa anim, na wodii abuada saa da no.+ Na wɔkae wɔ hɔ sɛ: “Yɛayɛ Yehowa bɔne.”+ Ná Samuel bu Israelfo atɛn+ wɔ Mispa. 7 Filistifo no tee sɛ Israelfo aboaboa wɔn ano wɔ Mispa, na Filistifo ahene+ no tu baa Israel so. Bere a Israelfo no tee no, Filistifo no nti wosuroe.+ 8 Ɛnna Israelfo no ka kyerɛɛ Samuel sɛ: “Nnyae sɛ wubesu afrɛ Yehowa, yɛn Nyankopɔn no ama yɛn,+ na onnye yɛn mfi Filistifo nsam.” 9 Na Samuel faa oguammaa a onum nufu na ɔde no bɔɔ ɔhyew afɔre mũ+ maa Yehowa, na Samuel su frɛɛ Yehowa maa Israel,+ na Yehowa gyee no so.+ 10 Ɛbae sɛ Samuel gu so rebɔ ɔhyew afɔre no, Filistifo no twiw bɛnee sɛ wɔne Israel rebɛko. Na Yehowa maa aprannaa boboom denneennen+ guu Filistifo no so saa da no de maa wɔn adwene tu frae,+ na wodii nkogu Israel anim.+ 11 Ɛnna Israel mmarima fii adi fii Mispa kotiw Filistifo no, na wokunkum wɔn ara kosii Bet-Kar anafo. 12 Na Samuel faa ɔbo,+ na ɔde sii Mispa ne Yesana ntam, na ɔtoo ne din Ebeneser.* Ɛnna ɔkae sɛ: “Yehowa aboa yɛn abesi sesɛɛ.”+ 13 Saa na ɛyɛe a wodii Filistifo so nkonim, na wɔamma Israel asase so bio,+ na Samuel nna nyinaa, Yehowa nsa ko tiaa Filistifo no.+ 14 Na nkurow a Filistifo gye fii Israel nsam no, ɛsan bedii Israel nsam nkakrankakra, efi Ekron kosi Gat; ɛho nsase nso, Israel gye fii Filistifo nsam. Na asomdwoe baa Israelfo ne Amorifo ntam.+ 15 Samuel buu Israel atɛn ne nkwa nna nyinaa.+ 16 Na otutuu akwan afe afe kɔɔ Betel+ ne Gilgal+ ne Mispa+ hyiae, na obuu Israel atɛn+ wɔ saa mmeae yi nyinaa. 17 Nanso na ɔsan ba Rama+ efisɛ ɛhɔ na na ne fie wɔ, na ɛhɔ na obuu Israel atɛn. Na osii afɔremuka wɔ hɔ maa Yehowa.+
^ Ɛkyerɛ “Ɔboa Bo.” Ɛsono Ebeneser a ɛwɔ 4:1 ne 5:1 no.